यस्ता छन् साङ्लाको कारण लग्न सक्ने रोग र साङ्ला भगाउने सजिलो उपाया - ज्ञानविज्ञान
यस्ता छन् साङ्लाको कारण लग्न सक्ने रोग र साङ्ला भगाउने सजिलो उपाया
साङ्ला देख्दा हामीलाई घिन लाग्छ कतिलाई त डर पनि लाग्छ | गर्मी बिस्तारै बढ्दैछ । गर्मी बढेसँगै लामखुट्टे, झिँगा र साङ्ला (कक्रोज)ले दुख दिन्छ । साङ्ला न मारेर सकिन्छ, न धपाएर । यसले घरको विद्युतिय यन्त्रलाई, फोहोर फैलाउँछ साथै खानेकुरालाई दुषित बनाइदिन्छ ।
साङ्लाजन्य फोहोरबाट खानेकुरा बचाउन गाह्रो हुन्छ । यस्तो खाना सेवन गर्दा पेटसम्बन्धि समस्या हुन्छ । त्यसैले गर्मी याममा साङ्लाको संक्रमणबाट बच्न विशेष सर्तकता अपनाउनुपर्छ ।
घरको कुनाकाप्चामा साङ्ला नै साङ्ला भेटिन्छ । बेडरुम, भान्सा जताजतै साङ्ला हुन्छ । यस्ता साङ्लाले खानेकुरा दुषित बनाउँछ । त्यस्तो खानेकुरा सेवन गर्दा हामीलाई पेटको समस्या हुन्छ । वान्ता वा पखला लाग्न सक्छ ।
साङ्लाको कारण लाग्नसक्छ यस्ता रोग
१.ब्याक्टेरियाको कारण संक्रमण
साङ्लाको पेटको जिवाणु खानामा पर्छ । यसले पाचन क्रियामा समस्या उत्पन्न गर्छ । एक अध्ययन अनुसार, जीवाणु सूडोमोनाज ऐरुगिनोसा साङ्लाको पेटमा हुन्छ । यो यूरिन ट्रेक्ट इन्फेक्सन, पाचन सम्बन्धी समस्या र सेप्सिसको कारण बन्छ ।
साङ्ला दम रोगीका लागि त सत्रु नै हो । घरमा साङ्ला धेरै बढ्नु भनेको दम रोगीको लागि थप समस्या निम्त्याउनु हो ।
साङ्लाको कारण फूड प्वाइजन हुने संभावना रहन्छ । यसका साथै टाइफाइडको पनि समस्या हुनसक्छ । किनपनि यस्तो हुन्छ भने, साङ्ला सैलमोनेला नामक भाइरस फैलाउने प्रमुख श्रोत हो ।
साङ्लाको कारण एलर्जीको समस्या हुन्छ । यसले छालामा समस्या ल्याउन सक्छ । खासमा साङ्लाले मुखबाट र्‍याल निकाल्छ । त्यस्तो र्‍याल भान्साको कुनैपनि सामानमा रहनसक्छ ।
भाँडावर्तन, खानेकुरामा र्‍याल रहन्छ । साथै ओड्ने ओछ्याउनेमा पनि साङ्लाको र्‍याल रहन्छ, जसले एलर्जीको समस्या ल्याउँछ ।
साङ्ला भगाउने यी ४ घरेलु उपाय अफ्नाउनुस
साबुन या स्याम्पुको झोलले सबैभन्दा छिटो र सजिलो किसिमले साङ्ला मर्दछन् । साङ्लाको शरीरमा साबुनको झोल परेपछि यसले बाहिरबाट हावा लिन पाउँदैन ।
साङ्लाले श्वास फेर्न छालाको सहारा लिने हुँदा शरीरमा साबुनको झोलले स्वास फेर्न अथवा लिन अप्ठ्यारो हुने कारणले गर्दा साङ्ला सास लिन नसकी छटपटिएर मर्छ ।
एउटा भाँडोमा नुहाने साबुनको झोल तयार गर्ने । स्याम्पु मिसाउँदा पनि हुन्छ । सांग्लाहरु भएको स्थानमा यो झोल छर्किने । सांग्लाहरु भाग्न नपाउन भनेर चारै तिर झोल को अलि चौडा घेरा बनाउँदा पनि हुन्छ ।
अब यो झोल सांग्लामाथि छर्किने । सांग्ला भाग्न खोज्छन् । केही मर्छन् । भाग्न खोजेका सांग्लामाथि यो झोल छर्किँदै जाने । लुगा धुने साबुन भन्दा नुहाने साबुन डिटोलको झोलले यो छिटो मर्दछन् ।
तेजपत्ताको गन्धसँग सांग्ला भाग्ने गर्छ । केही पत्ता सांग्ला धेरै बस्ने कुनामा राखिदिनुहोस् । यसको गन्धले कक्रोच आफैँ भाग्ने गर्छ । तर, एउटै पत्ताले लामो समय काम नगर्ने भएकाले केही हप्ताको अन्तरमा त्यसलाई बदल्नुपर्छ ।
३.सोडा र चिनी
सोडा र चिनी कचौरामा बराबर मात्रामा सोडाको धुलो र चिनी मिसाएर कक्रोच धेरै बस्ने ठाउँमा राख्नुहोस् । चिनीको गुलियोले कक्रोचलाई आकर्षित गर्छ, त्यसलाई खाएपछि सोडाले मार्ने काम गर्छ । समय–समयमा यसलाई पनि परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ ।
ल्वाङको गन्ध ल्वाङ पनि कक्रोच भगाउने उत्तम उपाय हो । कक्रोच धेरै लाग्ने ठाउँमा ल्वाङका केही टुक्रा अथवा धुलो राखिदिनुहोस् । यस उपायबाट कक्रोच भाग्छ ।
हामीले मट्टीतेलको प्रयोगद्वारा पनि साङ्लाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । तर, यो प्रज्वलनशील पदार्थ भएकाले प्रयोग गर्दा निकै सावधानी र सजगता भने अपनाउनु पर्ने जरुरी रहन्छ ।
साङ्ला रहनको लागी ओसिलो ठाउँ अतिनै अनुकूल मानिन्छ । त्यसैले पनि आफ्नो भान्सा कोठालाई ओसमुक्त राख्नुभयो भने पनि साङ्लाबाट केही हदसम्म भएपनि राहत हुन्छ |
Don't Miss it किन हुन्छ आँखामा जलबिन्दु ?
Up Next दाँत किन हुन्छ पहेँलो र कालो हुन्छ ? ब्रस नगर्दा स्वास्थ्यमा हुने खतराहरु र दाँत तथा स्वस्थ गिँजा राख्ने उपायहरू
एस्ता छन्, क्यान्सर लग्नुका कारण र कम गर्ने तरिका
यी हुन् क्यान्सरका कारण १. चुरोट, खैनी, सूर्ति आदिको सेवनले क्यान्सर निम्त्याउँछ । यस्ता पदार्थमा चार हजारभन्दा बढी प्रकारका रासायनिक…
कतै तपाईको पनि बाङ्गो बुढी औला छैन ? जान्न चाहानुहुन्छ तपाईको स्वभाव कस्तो छ,
यदि हामी ज्योतिष शास्त्रलाई मान्ने हो भने हाम्रो शरिरको विभिन्न अंगहरुले तपाईको सोच तथा बानिहरु थाहा पाउन सकिन्छ । त्यस्तै…
शरीरमा भिटामिनको कमी हुँदा देखिने समस्या, यस्ता छन्
१. आँखा सुन्निनु कहिले कहिं राम्ररी निन्द्रा नपर्दा आँखा सुन्नि सक्छ । ठीक त्यसैगरी शरीरमा आयोडिनको कमी हुँदा पनि आँखा…
चिनीको प्रयोग दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ जसबारे केहि कुरा यस्ता छन्
कलेजोमा असर : खानेकुराबाट दुई प्रकारको सुगर प्राप्त हुन्छ– ग्लुकोज र फ्रुक्टोज । मह तथा पाकेका फलहरुबाट प्राप्त हुने गुलियोलाई…
खाना मा रुची बढाउने केहि टिप्स
१. कागतीको रस पानीसँग खाँदा भोक बढ्छ । २. पेटको अग्नि कमजोर भएपछि खाना पच्दैन र खाना रुचिकर समेत हुँदैन । ३. …
हातले कपाल समातेर तान्दा औालाका भरि कपाल आउछ ? यसो गर्नुहोस
१. कपाल झर्ने विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शरीरमा लागेको रोग, खानपिनलगायतले कपालमा असर गरेको हो भने नयाँ उपचार प्रक्रियामा…
बाँझोपनको उपचार हुन्छ
चिकित्सकहरू महिलाको उमेर ३५ र पुरुषको उमेर ४० नाघिसकेको अवस्थामा नियमित सम्पर्क गरेको छ महिनासम्ममा बच्चा नभएमै जाँचका लागि सल्लाह…
यी खानेकुराको अत्यधिक सेवन गम्भीर रोगको कारण बन्ने गर्दछ ।
१. पेय पदार्थ यसमा चीनी र फोस्फोरिक एसिड हुन्छ । धेरै पेय पदार्थ पिउँदा मुटुमा समस्या हुने गर्दछ र स्मरणशक्ति…
हरियो केराउका फाइदाहरु
हरियो केराउको मौसम सुरु भएसँगै मानिसहरुको यसप्रतिको लोकप्रियता पनि बढ्ने गर्छ। तर हरियो केराउले शरीरलाई फाईदा मात्र गर्छ भन्ने छैन।…